Madaxweyne Xasan oo u ciirsaday odayaasha kadib markii culeys kasoo wajahay baarlamaanka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bilaabay kulamo uu la yeelano odayaashii dhaqanka ee soo xulay baarlamaanka Soomaaliya.
Kulanka uu Xasan Sheekh la yeeshay odayaasha ayaa yimid kadib markii uu culeys kazoo wajahay tiro aan yareyn oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka, kuwaasoo ugu baaqay inuu kursiga baneeniyo.
Warar lagu kalsoonyahay ayaa sheegaya in Xasan Sheekh uu odayaasha kala hadlay iney ka gacansiiyaan culeyska kazoo wajahay baarlamaanka maadaama ay iyagu soo xuleen xildhibaanada.
War kazoo xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynahu ayaa marka hore duubaabka Soomaaliyeed uga warbixyey sababaha uu ugu yeeray islamar-kaana u sheegay in ujeedada kulanka tahay wada-tashi, talo-bixin iyo hiigsiga mustaqbalka dalka.
“Dalab gaar ah ee uu madaxwewyni wato ma jiro ee kala warqaadasho iyo talo ayaan idin kugu yeeray gogoshaan” ayuu madaxweynaha Soomaaliya ku yiri duubabka uu shalay galab la kulmay.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa odayaasha u sheegay iney jiraan dhibaatooyin aan jirin markii ay duubabku baarlamaanka soo dhisayeen, wuxuuna yiri “Dowladdii aad soo dhisteen dhinaca siyaasadda iyo dhinacyo kalaba horumar ballaaran ayey ka sameysay, mashaakilaad maalintii dowladdu aad dhiseyseen aanan jirin ayaa hadda jira”.
“Waad og-tihiin Shabaab degaano badan ayaa laga saaray. mar haddii Shabaab degmo am degaan laga saaro mushkilad ayaa meesha ka imaaneeysa, anagu waxaan dooneynaa in Odayaasha Dhaqanka in arrimahaasi Dowlada kala shaqeeyaan deegaanadaasna ka warqabaan” ayuu sidoo kale yiri madaxweyne Xasan Sheekh.
Malaaq C/raxmaan Shiino oo ka mid ah duubabkii la kulmay madaxweyne Xasan ayaa warbaahinta u sheegay in madaxweynuhu ka dalbaday iney xaaladda dalka jirta talo ka siiyaan, balse uu ka diiday iney si toos ah ugu lug yeeshaan xallinta khilaafka u dhaxeeya isaga iyo qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya.
Malaaq C/raxmaan Shiino ayaa sheegay iney dhankoodu madaxweynaha u sheegeen in la daycay odayaasha dhaqank, islamarkaana ilaa hadda la dilay 9 oday dhaqameed oo ka mid ah kuwii baarlamaanka wax kazoo xulay.
Madaxweynaha iyo Odayaasha ayaa sidoo kale ka wada hadlay qorshe Xafiiska Madaxweynaha uu waday kaasi oo ahaa in Duubabka Soomaaliyeed loo qaado qaar ka mid ah Wadamada Qaaradda Afrika oo horay dagaallo u soo maray si waayo aragnimo looga soo qaato. Maadaama in ku dhow rubac qarni ay ka soo wareegatay burburkii Dowladdii Soomaaliyeed marka la gaaro Janaayo 2015. Odayaasha Dhaqanka ayaa soo dhaweyeen arrinkan.
Madaxweyne Xasan oo aan dhawaanahan wax kulan la yeelaan duubab intaan la eg ayaa xilliga kulankaani dhacay kusoo beegay kadib markii dhawaan in ka abdan 100 xildhibaan usuu jeediyeen inuu xilka iska casilo, iyagoo ku eedeeyey inuu fashilmay.
Qaar ka mid ah odayaasha kulanka ka qeybgalay ayaa looga yeeray deegaanada Somaliland oo ay socdaal ku marayeen, waxeyna qaarkood soo gaabiyeen safarkooda, kadib markii lagu dhegay madaxweynaha.